Zoro Ezo Ihe nzuzo Spy Pen Camera - Dekọọ ihe 90Mins, SDCard 32GB Max (SPY008) | Ngwọta OMG
O Camera Pen Hidden Spy Camera Camera - Detuo 90Mins, SDCard 32GB Max (SPY008)
ụdị Ụdị: 1 mode na-enye gị ohere iwepụta foto kpamkpam ma dekọọ ụda dị mfe iji zọpụta ya na sd kaadị, gbanwee gaa na 2 mode maka ndekọ vidiyo na chekwaa na sd kaadị. Lelee faịlụ gị niile na kaadị a, jiri onye na-agụ kaadị, ma ọ bụ tinye fan ahụ na kọmputa gị.
Enweghị Software: nke a nledo ọ bụ ma PC ma Mac jikọtara. A pụrụ itinye stampụ ụbọchị ahụ dị ka isi okwu na ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe oyiyi, yabụ ịhazi data gị bụ ikuku. Igwefoto igwe nyocha anyị na-agbaso ụkpụrụ kachasị mma.
Nkwa dị elu maka foto na vidiyo: Full HD 1920x1080p maka Na & 2560x 1920p maka Foto. Anya oghere 9712 zuru ezu, 8 mega pikselụ, ngwaike ruru atumatu zuru ezu. Nanị otu pịa na otu pịa na-enye gị ohere ịmalite / kwụsị ndekọ vidiyo ozugbo.
batrị: Ụlọ anyị, 100% rechargeable, batrị lithium dị elu (DC-5v) na-eme ka ihe ndekọ ọ bụla ọzọ ederede dị. AKWỤKWỌ MGBE Ị NA-AHỤ NKE Ụlọ.
Nke a bụ obere pen. Ee, ọ bụghị nanị na e ji ede ihe kamakwa a rụrụ DVR (Digital Video Recorder) na igwefoto HD nke enwere ike iji jide / wepụta foto ndị dị elu na vidiyo. Ọ bụ n'ezie igwefoto igwefoto akụrụngwa nke bụ ihe ọgụgụ maka nlekota na ijide ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụ dịka onyinye dị mma.
Nledo igwefoto Pen Record HD 1080p HD
Igwe mgbatị / data data USB
Jiri ya rụọ ọrụ na Njikere Ntanetị ka ị nwee ike ịse ihe ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọghị ebe ahụ
Na-enye 60 - minit 90 nke dijitalụ nyocha ọrụ.
Memory: Ogwe ogwe maka Micro SD / TF kaadị nchekwa aka ruo 32GB
Jiri maka ihe oyiyi, vidio, ma ọ bụ dị ka obere ụgbọala nchekwa nchekwa.
Gụnyere USB nkwụnye ọkụ / Data cable.
Ụdị USB: Ogwe ụgbọelu USB.
Usoro Nkwado: Nkwado WINDOWS98 / 98SE / ME / 20000XP / MAC OS / LINUX ma chọpụta ọdịiche dị na sistemụ arụmọrụ, wụnye ụgbọala na-agagharị, ọ dịghị mkpa ka ịwụnye aka (Wezụga WINDOWS98).
SPY008 - Foto igwe foto igwe foto
Nzuzo 9030 7 Echiche Taa